Ngwa ala fatịlaịza Linear Vibrating Screening Machine na ndị na-arụ ọrụ | YiZheng
Na Linear jijiji Screener na-eji ihe siri ike na-eme ka mmiri sie ike site na igwe-vibration, ihe ndị ahụ na-ama jijiji na ihuenyo ma na-aga n'ihu n'ahịrị.
Kedu ihe igwe nyocha Linear jijiji?
Na Ihe nyocha Linear (Linear Vibrating Screen) na-eji vibration moto excitation dị ka vibration isi iyi na-eme ihe jijiji elu na ihuenyo na-aga n'ihu na a ogologo akara. Ihe a na-abanye n'ọdụ ụgbọ mmiri nke igwe nyocha nke ọma site na nri. Otutu nha na nke kachasi elu na-emeputa site na ihuenyo di iche iche ma wepu ha site na uzo di iche iche.
Kpụrụ Ọrụ nke Linear Vibrating Screening Machine
Mgbe linear ihuenyo na-arụ ọrụ, synchronous adiana nke abụọ Motors-eme ka ndị vibration exciter n'ịwa a agbara excitation ike, na-amanye ndị ihuenyo ahụ na-akpali ndị na ihuenyo longitudinally, nke mere na ihe onwunwe na ihe onwunwe bụ obi ụtọ na site n'oge ruo n'oge na-atụba a nso. Si otú emecha ihe screening ọrụ. A na-ejikwa igwe vibration abụọ na-ebugharị ihuenyo na-eme mkpọtụ. Mgbe igwe abụọ ahụ na-emegharị emegharị na-arụkọ ọrụ ọnụ ma na-atụgharịkwa, ike na-atọ ụtọ nke ihe ndị eccentric mebiri na-akagbu onwe ha n'akụkụ mpụta, a na-ebunyekwa ike ọkụ ọkụ na-agagharị na ihuenyo niile. N'elu ala, ya mere, ụzọ ngagharị nke igwe sieve bụ ahịrị kwụ ọtọ. Uzo nke ike na-akpali akpali nwere udiri echiche maka ihu ihuenyo. N'okpuru ngwakọta nke ike na-akpali akpali na njide onwe onye nke ihe ahụ, a na-atụba ihe ma wụpụ n'usoro n'usoro ihu na ihu ihuenyo, si otú a na-emezu nzube nke nyocha na ịkekọrịta ihe ahụ.
Uru nke Linear Vibrating Screening Machine
1. Ezigbo akara na obere uzuzu.
2. Obere ike oriri, obere mkpọtụ na ndụ ogologo oge nke ihuenyo.
3. High screening nkenke, nnukwu nhazi ike na mfe Ọdịdị.
4. Ofụri Esịt nchọ Ọdịdị, akpaka orùrù, ọzọ adabara nzukọ akara arụmọrụ.
5. A na-eji ígwè efere na profaịlụ welded akụkụ niile nke ihuenyo ahụ (a na-ejikọ bolts n'etiti ụfọdụ ìgwè). Ihe zuru ezu na rigidity dị mma, nke siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi.
Linear ọma jijiji echetakwa Machine Video Display
Linear ọma jijiji echetakwa Machine Model Nhọrọ
Nke gara aga: Rotary Drum myọcha Machine
Osote: Rubber echebe ebu Machine
Okwu Mmalite Gịnị bụ Granular Fatịlaịza Rotary mkpuchi Machine? Organic & Compound Granular Fertilizer Rotary Coating Machine Na-ekpuchi igwe eji arụ ọrụ nke ọma dịka usoro chọrọ. Ọ bụ irè fatịlaịza pụrụ iche mkpuchi akụrụngwa. Ojiji nke teknụzụ mkpuchi nwere ike ịdị irè ...
Igwe ikuku na-ekpo ọkụ
Okwu Mmalite Gịnị bụ Igwe Ọkụ Na-ekpo ọkụ? Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-eji mmanụ ọkụ ọkụ ọkụ ozugbo, na-etolite ọkụ ọkụ site na ọgwụgwọ dị elu dị elu, ma kpọtụrụ ihe maka ikpo ọkụ na ihicha ma ọ bụ mmiri. Ọ ghọọla ngwaahịa nnọchi nke isi iyi ọkụ eletrik yana ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Organic Fatịlaịza Now Polishing Machine? Fatịlaịza organic mbụ na granulu fatịlaịza nwere ụdị na nha. Iji mee ka fatịlaịza nsogbu dị iche iche mara mma, ụlọ ọrụ anyị emepụtala igwe fatịlaịza na-eme ka mmanụ fatịlaịza, onyinye fatịlaịza polishing na igwe wee ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Chemical Fatịlaịza onu Mill Machine ji? Chemical Fatịlaịza onu Mill igwe bụ ọkara-sized kehoraizie onu na nkume igwe nri. Ezubere igwe a dika ụkpụrụ nke ngwe ngwe. Mgbe n'ime na n'èzí ngughari bugharia na uzo ozo na oke ọsọ, a na-akụpịa ihe ...